विश्वकै मानिसले भन्छन् जन्मिएपछि एकपटक घुम्नैपर्ने नेपालका यी उत्कृष्ट १८ स्थान – पुरा पढ्नुहोस्……
विश्वकै मानिसले भन्छन् जन्मिएपछि एकपटक घुम्नैपर्ने नेपालका यी उत्कृष्ट १८ स्थान
खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी तथा अछाम जिल्लाको केन्द्र हो । नयाँ वर्षका अवसरमा पदयात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि खप्तड उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ । खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, शिव दह, केदारढुङ्गा जस्ता धार्मिक स्थलका साथै २२ वटा हिमाली फाँट पाटन यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन् । त्यसका साथै यो क्षेत्रमा नाचिने हुड्के नाचले पनि जो कसैलाई आकर्षित गर्छ । खप्तडनजिकको प्रमुख बस्ती डोटीको शिलगढी हो । शिलगढीबाट अघि बढेपछि बास उपलब्ध गराउने स्तरीय होटलको व्यवस्था नभएको हुँदा आफैंले पाल, स्लिपिङ्गब्याग, खाना तथा पकाउने सामग्री बोकेर जानुपर्छ ।
फुर्सदमा घुम्न निस्कनेहरुको सुचीमा पोखरा अग्रपंक्तीमा आउँछ । झनै चाडबाडको फुर्सदमा परिवार तथा साथीहरुसँग घुम्नका लागि धेरैको रोजाइ पोखरा नै हुन्छ । हुन पनि प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखरा पुगेपछि दिनहरु वितेको पत्तै पाउन सकिदैन । एकपछि अर्को आकर्षक स्थलहरु घुम्दा घुम्दै दिन वित्छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, मौसमको अनुकूलता, आथित्य सत्कार यहाँको पहिचान हो ।
नेपालमा घुमफिरका लागि धेरै रमणिय स्थानहरु मध्ये सौराहाको नाम अग्रंपक्तीमै जोडिएर आउँछ । चितवनका अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमध्ये सबै झुम्मिने भनेको सौराहामा नै हो । फुर्सदको समय र उपयुक्त मौसम मिलाएर पारिवारिक वा हनिमुन ट्रिपका लागि धेरैको रोजाइ सौराहा नै हुने गर्छ । सौराहा ‘वाइल्डलाइफ टुरिजम’का लागि प्रशिद्ध छ । हुन पनि सौराहाको पर्यटन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहाँका जनावर, पंक्षीहरुमा अडिएको छ । हात्ती चढेर जंगल सफारी गर्नु, वन्यजन्तुहरु हेर्नु, राप्ती नदिमा डुङ्गा सयर गर्नु, सूर्यास्त हेर्नु, थारु कल्चरको अवलोकन गर्नु सौराहाका आकर्षणहरु हुन् ।
यहाँ हात्ती सफारी सबैभन्दा धेरैको रोजाइमा पर्ने गर्छ । सफारी गर्न आठसय देखि १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सौराहामा डुङ्गा सफारी अर्को आकर्षक पक्ष हो । राप्ती नदिमा डुङ्गा सयर गर्दा गोही, गैंडा, चराचुरुङ्गी हेर्न तथा अवलोकन गर्न पाइन्छ । साथै, सूर्यास्त पनि सौराहाबाट देख्न सकिन्छ । थारु संस्कृती, परम्परा, रहनसहन बारेमा पनि सौराहा पुगेपछि जान्न बुझ्न पाइन्छ । काठमाडौंबाट हवाइ वा बसको यात्रा गरेर सौराहा पुग्न सकिन्छ । दुईरातका लागि प्रति व्यक्ति १२ हजार रुपैंया बोकेमा सौराहा मजाले घुम्न सकिन्छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङमा विशेष गरी विदेशीहरु घुम्न पुग्ने गर्छन । तर नेपालीहरु पनि मुक्तिनाथको दर्शन पनि गर्न पाईने र शाहसिक पदयात्रा पनि हुने भएकाले यो क्षेत्र रोजाइमा पर्छ । मुस्ताड तल्लो र माथिल्लो मुस्ताङ गरी दुई तहमा विभाजित छ । माथिल्लो मुस्ताङमा सडकको पहुच पुगेपछि अहिले आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनमा बृद्धि भएको छ ।
झापाको जामुनखाडी सीमसार क्षेत्र पर्यटकीय नमुनाका रूपमा चर्चित छ । सुरुङ्गामा पर्ने यो स्थान सबैको रोजाइमा पर्न थालेको छ । जामुनखाडी सीमसार क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुङ्गाबाट करिब एक किलोमिटर उत्तर हिँडेर वा गाडीमार्फत पुग्न सकिन्छ । चुरे क्षेत्रको घना जंगलका रूपमा रहेको यो भूभाग उत्कृष्ट गन्तव्य हो । यहाँ विश्वबाट लोप हुँदै गएको अजिङ्गर पनि संरक्षित गरिएको छ । त्यहाँको सानो चिडियाखानामा अन्य वन्यजस्तुहरू पनि संरक्षित छन ।
दोलखा जिल्लाको प्रमुख र आकर्षक गन्तव्य हो जिरी । जिरीलाई स्वीटजरल्याण्डको ज्युरिच सहरसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । तामाकोशी नदी, मनमोहक हरियाली र झरना तथा परम्परागत बस्तीले जिरीलाई रमणीय बनाएका छन् । जिरी सगरमाथा प्रवेशद्वारका रुपमा पनि परिचित छ । यहाँबाट सगरमाथाका लागि पदयात्रा सुरु हुन्छ । काठमाडौंबाट करिब आठ घण्टाको बस यात्रापछि जिरी पुग्न सकिन्छ । स्वीटजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा विकास भएको जिरी निकै आकर्षक शहर हो । जिरीमा बस्नका लागि सुविधासम्पन्न होटलहरु छन् । सामान्यतया तीन दिनको अवधि जिरी घुम्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कबाट जिरीको बस चढेर पुग्न सकिन्छ ।
काठमाडौंको व्यस्त दैनिकीलाई बिश्राम लिनलाई नगरकोट पुग्दा हुन्छ । सेताम्मे हिमाल हेर्न तथा एक रात बसोबास गर्नका लागि राजधानी सबैभन्दा उपयुक्त स्थल हो नगरकोट काठमाडौंबाट १ घण्टा ३० मिनेटको सवारी यात्रामा पुग्न सकिने भएकाले पनि यो स्थान उपयुक्त हो । लाङटाङ हिमालको मनोरम दृश्यका साथै विश्वका उत्कृष्ट दश स्थान मध्ये सूर्य उदाएको हेर्न नगरकोट धेरैको रोजाइमा पर्छ । एक दिनका बास बसाई लागि यस स्थानलाई रोज्न सकिन्छ । होटलहरु अलिक मंहगा छन । काठमाडौंको माछापोखरीबाट सोझै बस चढेर नगरकोट पुग्न सकिन्छ।
स्याङ्जाको पञ्चमुल गाविस– ४ मा पर्ने सिरुबारी ’होमस्टे’ का रुपमा प्रख्यात छ । गुरुङ जातीहरुको संस्कृती भएको गाउँले परिवेशको सिरुबारीमा आन्तरिक पर्यटकहरुबो भिड लागिरहन्छ । यहाँ पुग्ने पर्यटकहरुलाई बुढापाकाले छोरा–नाती जस्तै माया र सत्कार गर्छन । पाहुना सत्कार गर्ने राम्रो शैली छ यहाँ । हिँडेर आउनेलाई गाउँको मुखैमा र बसमा आउनेलाई बसपार्कमा उनीहरू स्वागत गर्छन । गुरुङ पहिरनमा सजिएका महिला र पुरुषले फूलमाला लगाइदिन्छन भने दलित समुदायले पञ्चै बाजा बजाउँछन । पाहुनालाई सुरुमा गाउँको गुम्बा पुर्‍याउँछन । त्यसपछि खान खुवाउने र नाचगानमा रमाउन पाइन्छ । एक रात बसेको हजार देखि १५ सय खर्च लाग्छ । यहाँ घुम्ने भनेको गाउँमात्र हो । यहाँ पुग्नलाई पोखराबाट सोझै गाडी पाइन्छ । ६४ किलोटिर बाटो पार गर्न गाडीमा पाँच घन्टा लाग्छ । यतिबेलाको मौसम सिरुबारी घुम्न लायक छ ।
हिउँद महिनामा हिउँ खेल्ने गन्तब्यका रुपमा परिचित दामन नयाँ बर्षको राम्रो गन्तब्य हो । काठमाडौंबाट करिब ८० किलोमिटर टाढा रहेको दामन मकवानपुर जिल्लामा पर्छ । थानकोट-नौबिसे हुँदै पृथ्वी राजपथमार्फत सजिलै पुग्न सकिने दामनमा र्बाहैकाल चिसो हावा आइरहन्छ ।
काठमाडौंबाट नजिकै भएकाले ‘मिनीइलाम’ अर्थात भोटेचौरको चियाबगान धेरैको रोजाइमा पर्छ । प्राकृतिक सौन्दरयतामा रमाउन मात्र होइन फोटो खिचेर आनन्द लिन भोटेचौरमा मानिसहरु झुम्मिने गर्छन । चावहिलबाट ३८ किलोमिटर टाढा रहेको सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरमा सुविधायुक्त होटलहरु खुलेका छन् । साँखुबाट दुई घण्टाको बसयात्रा गरे भोटेचौर पुगिन्छ । साँखुबाटै हाइकिङ गर्दै गए झनै मजा आउँछ । हाइकिङमा पाँच घण्टाको बाटो हो ।
Prevनेपाल सरकारलाई खुल्ला चुनैाति दिदै यी युवा यसरि खनिय सरकार विरुद्ध भिडियो लाइब (भिडियो लाइब )
Nextयुरिक एसिड के हो ? हुने कारण र बच्ने ८ उपायहरू जानिराख्न अत्यत जरूरी छ
सबैले हेर्नुहोला! कोरोना भाइʼसरसको संक्रमण नेपालमा प‍नि , कोʼरोना भाइरसको लक्षण र बच्ने उपाय यʼस्ता छन् !